Maxaa ka jiro wararka sheegayo in Dean Ambrose inuusan ka tageynin midowga WWE. – Filimside.net
Maxaa ka jiro wararka sheegayo in Dean Ambrose inuusan ka tageynin midowga WWE.
Taariikhda: January 31, 2019
Waxay aheyd maalinimadii shalay markii Midowga WWE ay shaaciyeen in xidiga musaaracada ka xamaasha ee Dean Ambrose uu diiday inuu kordhiyo qandaraaskiisa ku eg dhamaadka bisha April ee sanadkaan isla markaasna saxiixo heshiis cusub.
Heshiiska uu Dean Ambrose kula jiro Midowga WWE ayaa dhacayo dhamaadka bisha April ee sanadakaan 2019ka wuxuuna iska diiday inuu saxiixo wax heshiis cusub kadib markii loo soo bandhiga heshiis 5 sano ah oo uu mudadaas ku qaadan lahaa lacag ka badan 1 milyan oo doolar asigoo sheegay inuusan ku qanacsaneen maqaamkiisa midowga WWE.
Hada warar hoose ayaa waxay sheegayaan in Dean Ambrose laga leeyahay qorshe cusub kaasoo salka ku hayo inuu sameeyo soo laabasho weyn isla markaasna lagu wado in uu dib usoo laabto asigoo shakhsiyad cusub iyo magac cusub ku howl gali doono bixitaankaana uu yahay been guur.
Midowga WWE ayaa kaartooyin nuucyo badan dagaan iyagoo inta badan xidiga shirkadaasi ka tagaan ay dib ugu soo laabtaan kuwaasoo qaarkood waji cusub la yimaadaan waxaana loo badinayaa in Dean Ambrose uu midowga dib ugu soo laaban doono kadib markuu qandaraaskiisa dhamaado mase ahana war la hubo.